Soflera | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana no hampitomboana ny solitany: fitsipika sy toro-hevitra
Ny fanangonam-bozaka any an-tanimboly dia tsy malaza toy ny karazana fotsy mahazatra. Ny anton'izany toe-javatra izany dia ny tsy fahampian'ny fahalalàna ny zaridaina momba ny mety hampitombo ny lozika toy izany amin'ny toe-draharaha miaraka amin'ny toetr'andro mahafinaritra, ary ny tsy fahavitrihana hialokaloka amin'ny orinasa tsy fantatra.
Fantaro ny karazana maina
Ny renirano dia efa nahafantarana ny olombelona hatrizay ary iray amin'ireo sakafo be sakanana indrindra. Amin'ny zavaboary dia misy karazany maherin'ny dimampolo eto amin'ity legioma ity. Amin'ny karazana kara malaza indrindra, ny sariny sy ny anarany dia hampidirina ato amin'ity lahatsoratra ity. Белокочанная Ny kolontsaina malaza sy malaza indrindra amin'ny latabay.
Mamafy katsaka isika amin'ny zana-ketsa
Ny fitomboan'ny legioma toy ny kangoroa dia tsy mora amin'ny toetr'andro. Na izany aza, ny fahafantaranao ny toetran'ny fikarakarana azy sy ny fandinihana ireo teknolojia ilaina amin'ny fambolena sy ny fambolena, dia afaka mampifaly ny tenanao sy ny olon-tianao ianao amin'ny alokaloka tsara tarehy sy mahasalama ary mahasalama. Ny karazana tsara indrindra amin'ny kôlôlôlower dia manankarena amin'ny vitamina C, A, B, E, D, K, H, U ary singa toy ny amino asidra, karbôgria, volo, fibre, pectins, biôtinina, piora.
Kamia maina sy mampidi-doza
Ny katsaka dia legioma mena. Ny anarana dia tsy avy amin'ny zava-misy fa miloko izy, fa satria misy firavaka. Izy io koa dia antsoina hoe "manala baraka", satria ny endrik'ity karazana kara ity dia tena miavaka. Momba ny tombotsoan'ny kangoroa ho an'ny vatana mandritra ny fotoana lava dia tsy mifamaly, noho izany dia anio dia manana toerana mendrika hajaina izy io amin'ny sakafo isan'andro.
Ahoana ny fomba hanomanana katsaka amin'ny ririnina
Ny legioma tsara indrindra ao an-jaridainay dia kapoaka. Ny felany dia manamboatra sakafo, indrindra rehefa miaraka amin'ny broccoli. Ary tsy mendrika akory ny hiresaka momba ny tsiron-tsakafo sy ny tombom-barotr'io legioma io, satria ahitana singa mahasoa kokoa mihoatra noho ny proteinina izy io. Ny fananana vokatra tsara dia tiako ny mitazona azy araka izay azo atao.
Ahoana ny fomba hanomanana katsaka amin'ny teny Koreana amin'ny ririnina
Ny tsiron-tsakafony hafakely sy malefaka amin'ny kôlôpôla amin'ny fomba ofisialy Koreana dia manome tanteraka ny sakafon'ny hena na ny trondro, ka vitsy dia vitsy no handà tsy hitahiry siny amin'ny salady mahatsikaiky. Raha ny zava-drehetra dia tsy vitan'ny mofomamy fotsiny izy io, fa ilaina ihany koa: ny felam-bozaka madinika dia ahitana vitaminina sy microelements, ary ny fampiasana tsy tapaka ny ravinkazo dia manampy amin'ny fihenam-bidy, manatsara ny fizotry ny digestive sy ny fonction, ary koa ny fisorohana ny homamiadana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Soflera